मन मिल्याे माया बस्याे - MitiniNews :- Nepali News Portal | Information
Home/विचार/मन मिल्याे माया बस्याे
मन मिल्याे माया बस्याे
बिर्तामोड, चारआलीमा बस्दै आएका घरको माइलीे छोरी वर्ष २७ को एलिसलाई आफ्नो यौनिकताकाे बारेमा उनीमा अन्यौलता थियो । उसलाई लाग्थ्यो संसारमा म मात्र होकी यस्तो मानिस जो आफु केटी भएर केटीसंग मात्र किन आकर्षण भइरहेको छु ?
उसलाई डरपनि लाग्थ्यो कतै उस्मा कुुनै यो रोग लागेको त होइन ? के उ जस्तो मानिस अरुपनि छन् त, समाजमा उसलेआफ्नो मनमा लागेको कुरा भन्ने कुनै साथी पनि पाइन् । मौका पनि पाइन उनी गहिरो सोचमा डुबने गर्दथ्यो । सदै उसले आफुलाई यक्लो महसुस गर्दथ्यो सोच्दा सोच्दै उसको लागी के रात के दिन दुबै एउटै हुने गथ्र्यो ।
उनी संगै हुर्केका अनि संगै लडिबुडी गरेका साथीभाई भन्दा फरक किन म भन्ने उनीमा सोच आइरहन्थो र यस्ता कुराहरुले सधै उनलाई सताइरहन्थो । यसै क्रममा एकदिन यस्तो साथीसंग उनको भेट हुन पुग्यो जसले उनको जिवनमा ठुलो परिवर्तन ल्यायो ।
एलिस र आशिकाको भेट झापाको माइमेला धाममा भएको त्यसै भेटबाट उनीहरु मायामा परी हाल संगै बस्दै आएका छन् । हाल ६ बर्ष भैसकेको छ । एलिस आफुलाई पुरुष भन्न रुचाउँछन् ।
झट्ट हेर्दा केटा जस्तो देखिने एलिस आफ्नो यौनिक्ताका कारण आफु केटी प्रति आकर्षीत भएको र समाजका कारण आफ्नो यौनिक्ता लुकाउन बाध्य भएको तर उमेर बढ्दै जाँँदा उनी आफु केटी भएकाे र केटी नै जिवनसाथी रूचाएकाेले उनिहरू संगै बस्न मनपराए र हाल संगै बस्दै आएको छ ।
झट्ट हेर्दा जोकोही पनि उनीसँग झुक्कीनछन् किनकी उनी कुनै हेण्डसम ठिटो भन्दा कम छैनन् । साँचीनै भन्ने हो भने आशिका पनि कुनै हिरोइन भन्दा कम छैनन् ।
उनीहरुको जोडी साँच्चै भन्नु पर्दा दैवले जुराएर पठाएको जस्तो लाग्छ । एकआपसको माया हेर्ने हो भने समानताको कुरा गछौ हामी उनिहरुको मायामा कसैको नजर नलागोस किनकी माया धैरे किसीमको हुन्छ । तर माया त मायानै हो ।
चाहे त्यो पुरुषको होस् चाहे त्यो महिलाको होस चाहे त्यो महिला, महिला र पुरुष पुरुष बिचको नै किन नहोस । माया गर्ने अधिकार आफ्नो जिवनसाथी रोज्ने अधिकार जो कोहीले पनि पाउँछ तर यहाँको समाजले महिला महिला बिचको माया र पुरुष पुरुष बिचको मायालाई हेर्ने दृष्किोण धेरै फरक पाइएको छ ।
त्यै पुरुषले एउटा महिलालाई माया गर्छ भने यो समाज, राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा हामीले फरक पाउँछौ । तर यसै समाज भित्रको महिलाले अर्को महिलालाई प्रेम माया गर्छभने त्यसै दिनबाट त्यी महिला प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा हाम्रो समाजले फरक र घृणाको नजरबाट हेरेको हामीले पाउँछौ के माया गर्ने अधिकार हामीलाई छैन् ?
के विवाह गर्ने अधिकार हामीलाई छैन् । के पुरुष र महिलालाई मात्र यो अधिकार छ ? के बच्चा जन्माउने अधिकार हामीलाई छैन्? बच्चा जन्माउने अधिकार यो समाजले पुरुष र महिलालाई मात्र दिएको हो?
के हामी यो समाज र राज्यको अङ्ग हैनौ ? विपरीत लिङ्गको समबन्ध चाई प्राकृतिक भयो तर समलिङ्गीको समबन्ध र माया चाई किन अप्राकृतिक भयो ? समाज चलाउन, समाज बनाउन हाम्रो पनि त योगदान अरु सरह छ । हामीले पनि योगदान पुयाएका छौ ।
किन बुझदैन यो समाज अनि राज्यले, कानुन सबैको लागी बराबर भन्दथ्य तर यो कानुन, यो समाज केवल विपरीत दिशाका मानिस, विपरीत लिङ्गीको हकमा मात्र कीन ? यति हुँदा हुदैपनि किन बुझदैनन हाम्रो परिवार समाज र राज्यले हामीलाई ? के हामीलाई अरुसरह जिवन जिउँने अनि बाच्ने अधिकार साँचिनै नभएकै हो त ?
रजस्वला हुदा अपनाइने सजगताबारे एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम
१३ भाद्र २०७६, शुक्रबार ०८:३४
९ भाद्र २०७६, सोमबार ०६:१८